जतासुकै जहाँसुकै रामै–राम- विविधा - कान्तिपुर समाचार
चैत्र ३०, २०७५ कमल रिजाल
काठमाडौँ — रामनवमीमा मर्यादा पुरुषोत्तम रामको सम्झना गर्ने चलन छ । महर्षि वाल्मीकिका अनुसार भगवान् विष्णुले रामावतारको रूपमा अवतरण गरेकाले यस दिनलाई रामनवमी भनिएको हो । त्रेतायुगमा चैत्रशुक्ल नवमीको मध्याह्नमा रामको अवतरण भएको थियो । तुलसीदासले रामचरित मानसमा भगवान्को मानव अवतार हुन् भनेका छन्, उनलाई । वेदले पनि उनलाई यसै रूपमा स्वीकारेको छ ।
भगवान् भनेको षडैश्वर्य सम्पन्न शक्ति हो । यिनमा ऐश्वर्य, धर्म, यश, श्री, ज्ञान र वैराज्ञ पर्छन् । यिनलाई संयुक्त रूपमा ‘भग’ भनिन्छ । तिनका स्वामी भएकाले उनलाई भगवान् भनिएको हो । राम तिनै भगवान्का मानव रूप हुन्, जो उनका १२ अंशले युक्त छन् । व्यासजीका अनुसार भगवान्का २४ अवतार मुख्य छन् । तिनमा राम १८ औंंमा पर्छन् । कसैले दसावतारलाई मुख्य मानेका छन् । यस अनुसार भने उनी सातौंमा पर्छन् ।
अथर्ववेदीय रामपूर्वतापिनीयोपनिषद्ले राम शब्दलाई अनेकार्थ वाचक मानेको छ । यस शब्दको व्युत्पत्ति गर्दा ‘राति राजते वा महीस्थितः सन् इति रामः’ भन्ने हुन्छ । ‘राति वा राजते’ शब्दको पहिलो अक्षर ‘रा’ र ‘महीस्थितः’ शब्दको पहिलो अक्षर ‘म’ बाट ‘राम’ शब्द बनेको हो । यसको अर्थ हुन्छ– ‘जसले महीतल अर्थात् पृथिवीमा रहेर भक्तजनको इच्छा पूरा गर्छन्, जो राजाको रूपमा सुशोभित भएका छन्’, ‘जसबाट राक्षसहरू मारिएका छन्’, ‘जहाँ योगीहरूदेखि भोगीहरूसम्मका प्राणी जगतको मन रमाउने गर्छ’, त्यही नै राम हो ।
(कल्याण उपनिषद् अङ्क पृष्ठ ५३१) भोकाएका शिशुले आमाको काखमा बसेर स्तनपान गर्दा पाउने आनन्द पनि राम । आफ्ना शिशुले स्तनपान गरेका बेला आमाहरूलाई प्राप्त हुने आनन्द पनि राम । कामुक व्यक्तिले काम समाधिको अवस्थामा पाउने आनन्द पनि राम । पशुपन्क्षीले आमाको काखमा पाउने आनन्द पनि राम । समग्रमा प्राणीले आफ्नो चाहना पूरा हुदा जुन आनन्द प्राप्त गर्छन्, ती सबै राम नै राम ।
रामका तीन स्वरूप छन्–आध्यात्मिक, आधिदैविक र आधिभौतिक । आधिभौतिक रूपमा उनी तत्कालीन अयोध्या नरेश दसरथका पुक्र हुन्, जो बाबुको आज्ञाले १४ वर्ष वनवास गएका थिए । जसले समाजलाई दुष्ट शासकको अत्याचारबाट मुत्त गरेका थिए । आधिदैविक रूपमा उनी जगदीश्वर विष्णु हुन्, जसलाई देवर्षि नारदको श्रापका कारण मानव चोला लिनुपरेको मात्र थिएन, आफ्नै अर्धाङ्गिनी सीता हरण भई उनको मुक्तिका लागि बाँदरहरूको सहयोग लिनुपरेको थियो । आध्यात्मिक रूपमा उनी परमानन्द स्वरूप हुन्, जसले चराचर जगतलाई उनीहरूको स्वरूप, अवस्था, रुचि, क्षमता र विशेषता अनुसार आनन्द प्रदान गर्छन् ।
उपनिषद् दर्शनका अनुसार आब्रह्म स्तम्भपर्यन्त सबै रामकै विविधरूप हुन् । उनी कसैको सहयोगविना नै प्रकट हुन सक्छन्, त्यसैले ‘स्वभू’ हुन् । आफै प्रकाशित हुन्छन्, त्यसैले स्वाराट् वा ज्योतिर्मय छन् । ईशोपनिषद्मा एउटा पंक्ति छ– ‘...पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते ।’ अर्थात् पूर्णबाट पूर्ण निकाल्दा पनि पूर्ण नै बाँकी रहने कुरा कहीं पनि सम्भव हुँदैन, तर उनमा त्यो पनि सम्भव हुन्छ । उनी पूर्ण हुन् ।
पूर्ण नै रहन्छन् । अवस्था अनुसार पूर्णबाट पूर्ण नै निकाल्छन् । फेरि पनि आफू भने पूर्ण अवस्थामै रहन्छन् । उनको जन्म महिना, जन्म पक्ष, जन्म तिथि र समयले पनि उनलाई पूर्णताकै सङ्केत गरेका छन् । उनको जन्म चैत महिनामा भएको हो । चैत महिनाभनेको पूर्ण महिना हो । वर्षदिनका १२ महिनामा चैत स्थान १२ औंमै पर्छ । उनको जन्म शुक्लपक्षमा भएको छ । शुक्लपक्ष भनेको पूर्णिमातर्फ उन्मुख पक्ष हो । यो पनि पूर्णताकै प्रतीक हो । पूर्णचन्द्रको दर्शन पूर्णिमाकै दिन सम्भव हुन्छ ।
रामको जन्म नवमी तिथिमा भएको हो । नवमी भनेको नौ अङ्कको प्रतिनिधि तिथि हो, जुन आफैमा पूर्ण अङ्क हो । गणितमा नौभन्दा बढी अङ्क छैन । यसपछि जति अङ्क आउँछन् सबै एकदेखि नौ अङ्क नै दोहोरिने हुन् । हो, यसमा दस अङ्क अपवादमा देखिन्छ, तर त्यो पनि रूपमा मात्र हो, सारमा होइन । एकमा शून्य जोडिएर दस अङ्क बन्ने हो, तर शून्य एक्लैमा भने केही होइन । उसले अर्कोको साथ पाएपछि मात्र चमत्कार देखाउने हो । अतः पूर्ण अङ्क भनेको नौ नै हो । आठसम्म अर्को अङ्कको अपेक्षा रहन्छ । नौ पुगेपछि कुनै अपेक्षा रहन्न ।
रामको जन्म मध्याह्न भएको हो । यो पनि पूर्णताकै प्रतीक हो । मध्याह्नसम्म समय उँभो लाग्छ । त्यसपछि ओरालो । उँभो लाग्दै गरेको समय पूर्ण होइन, उँधो लाग्दै गरेको समय पनि पूर्ण हुन सक्दैन । उँभो लाग्दै गरेको समयले अर्को समयको अपेक्षा गरिरहेको हुन्छ । उँधो लाग्दै गरेको समयले पनि अर्को अपेक्षा गरेकै हुन्छ । अन्ततः पूर्णतामा रहने समय मध्याह्न नै बाँकी रहन्छ ।
रामायणका अनुसार रामले ११ हजार वर्ष राज्य गरेका छन् । (कतै १३ हजार वर्ष भन्ने पनि पाइन्छ) उनको शासनकालमा भूमण्डलमा कतै पनि अन्याय र अत्याचार हुन पाएन । जो जसले त्यस्तो धृष्टता गरे, अन्त्यमा कित उनकै अनुयायी हुनपुगेका छन्, कि समाप्त भएर गएका छन् । उनले आफ्नो जीवनमा जे गरे, समाजकै लागि गरे । शान्तिकै लागि गरे, सुशासनकै लागि गरे । हो, उत्तरार्द्धमा उनकै अर्धाङ्गिनी सीतामाथि अन्याय भयो, तर त्यो पनि रूपमा मात्र हो । सारमा उनले आफ्नै कर्मफल भोगेकी हुन् ।
पद्मपुराणमा उल्लेख भए अनुसार बाल्यकालमा उनकै कारण एउटी गर्भिणी शुगीले पति वियोगको पीडा भोग्नुपरेको थियो । त्यतिबेला उसले सीतालाई मैलेजस्तै तिमीले पनि गर्भिणी अवस्थामा पति वियोगको पीडा भोग्नुपरोस् भन्ने श्राप दिएकी थिइ रे । फलतः यतिबेला उनले सोही श्रापको फल भोग्नुपरेको थियो । (कल्याण पुराण कथाङ्क पृष्ठ १५८) अहिले उनी त छैनन्, तर उनको कीर्तिपताका भने फहराइरहेको छ ।
प्रकाशित : चैत्र ३०, २०७५ ०८:१२
चैत्र ३०, २०७५ विमल निभा
काठमाडौँ — नेपाली साहित्यका वरिष्ठ साहित्यकारद्वय खगेन्द्र संग्रौला एवं नारायण ढकाललाई विशुद्ध ‘डाक्टरको बाबु’ भएकोमा मेरो तर्फबाट हार्दिक बधाई ! केही दिनअघि ‘मेडिकल लिटरेचर मेला, सौराहा, चितवनले दुवै साहित्यिक बन्धुलाई यही योग्यताको आधारमा ससम्मान आमन्त्रित गरेको थियो । अब योभन्दा उम्दा तथा मौलिक सम्मान साहित्यकारहरूका निम्ति अरु कुन हुनसक्छ ?
यदाकदा यस्तो सम्मान अडाक्टरका पिताहरूले पनि नपाएको भन्ने होइन । म नै एक ‘सहिद पिता’को सम्मानमा आयोजित सभामा सामेल भएको छु । तर त्यो विलकुलै साहित्यविहीन घटना हो । नेपाली साहित्यमा बरोबर भइरहने लिटरेचर मेलासँग यसको कुनै सम्बन्ध छैन । अचेल यस प्रकारका लिटरेचर मेलाहरूका भयंकर बिगबिगी रहेको छ ।
कहिले सुन्दर नगरी पोखरामा साहित्यिक उत्सव भइरहेको छ भने कहिले झापामा त्योभन्दा भव्य साहित्यिक महोत्सव नै । यसले नेपाली कवि, कथाकार, समालोचक, उपन्यासकार आदिलाई अपूर्व शुभलाभको स्वर्णिम अवसर जुराइदिएको छ । यही सन्दर्भमा ‘डाक्टरको बाबु’ भएर मेरा दुवै साहित्यिक मित्र (यो शब्दप्रति खगेन्द्र दाइको कुनै आपत्ति नभए) लाभान्वित भएका हुन् । कदाचित मास्टर अथवा मजदुर अथवा क्लर्क अथवा किसानको बाबु भएका भए के हुन्थ्यो ? यहाँनेर स्मरणीय के छ भने खगेन्द्र संग्रौलाको संयुक्त राज्य अमेरिकास्थित छोरी डेजी संग्रौला र हालसम्म नेपालमै रहेका नारायण ढकालका छोरा रमेश ढकाल कुशल डाक्टर हुन् ।
नेपाली साहित्यमा दोसल्ला, फूलमाला, नगद पुरस्कार, सम्मानपत्र आदि प्राप्त गर्न डाक्टर छोराछोरी जन्माउनु पनि एक अतिरिक्त गुण हुनसक्छ, यो ‘मेडिकल लिटरेचर मेला, सौराहा, चितवनले प्रमाणित गरेको छ । तर यस्तै डाक्टर छोरीका बाबु नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) का साहित्यकार कमरेड प्रदीप नेपालचाहिँं अहिलेसम्म किन सम्मानपूर्ण हुनसकेका छैनन्, यो एक कठिन पहेलिका बनेको छ । यही लाममा डाक्टर छोराछोरी हुने अन्य साहित्यकारहरू पनि कम्ता छैनन् ।
जस्तो मेरो परम मित्र कवि अविनास श्रेष्ठलाई नै लिनोस् । उनको छोरी निहार श्रेष्ठ पनि डाक्टर हुन् । यस्तै डाक्टर सन्तानका पिता कवि आहुति, कथाकार राजेन्द्र पराजुली, उपन्यासकार आत्माराम पुडासैनी आदि पनि नभएका होइनन् । यिनीहरू प्नि ‘डाक्टर बाबु’ भएको नाताले यथोचित सम्मानका बलिया हकदार होइनन् त ? म पनि आफूलाई सम्मानित हुन अयोग्य ठान्दिन ।
अझ म त डाक्टरको बाबु नभएर डाइरेक्ट डाक्टर नै हुँ । किनभने म एक कवि हुँ । र कविहरूलाई शब्द, भाव र कल्पनाका निपूण डाक्टर मानिने गरिन्छ । अरुहरूले नमाने पनि म मान्छु । किन नमान्ने ? यस आधारमा मलाई पनि ‘मेडिकल लिटरेचर मेला सौराहा, चितवनले संग्रौला र ढकाल सरह सम्मान गरेको भए के विगार हुन्थ्यो र ? तर दुर्भाग्यवश यस्तो भएन ।
डाक्टरको साहित्यकार बाबु सम्मानित भएको छ भने डाक्टरको साहित्यकार छोराछोरीलाई चाहिँं किन यस्तो सम्मानबाट वञ्चित गरिएको हो, यो बुभिनसक्नु छ । उदाहरणस्वरुप नेपाली साहित्यका अप्रतिम साहित्यकार स्वर्गीय पारिजातलाई लिन सकिन्छ । उनी शत–प्रतिशत डाक्टर बाबुकै सुपुत्री हुन् । उनलाई यही आधारमा कुनै साहित्यिक उत्सव–महोत्सवमा मरणोपरान्त सम्मानित किन नगर्ने ? यद्यपि पारिजातजस्तो साहित्यकारलाई यस्तो सम्मान–फम्मानको कुनै आवश्यकता छैन ।
उनी त्यसै पनि व्यापक तवरले सम्मानित छन् नि ! आफ्नै साहित्यिक ऊर्जाले स्वतः सम्मानितलाई फेरि किन सम्मानित गर्नुपर्‍यो ? यस सिलसिलामा डाक्टर पिताका अरु साहित्यकार छोराछोरी को–को हुन्, यो साहित्यका विश्वविद्यालयीय अन्वेषकहरूका लागि पर्याप्त रोचकविषय हुनसक्छ । जब ‘फलाना महाकविका झड्केलो छोरो’ जस्तो विषयमा अनुसन्धान भएको छ भने यसमा किन
हुन सक्दैन ? जे होस्, डाक्टर ध्रुवचन्द्र गौतमका छोरा इसानचन्द्र गौतम पनि साहित्यकार हुन् । यसो ता उनी एक डाक्टर पनि हुन् ।
तसर्थ दुवै बाबुछोरा किन सम्मानका खातिर लायक नहुने ? हो, यहाँनेर एउटा समस्या के छ भने डाक्टर ध्रुवचन्द्र गौतम र डाक्टर इसानचन्द्र गौतम मेडिकल डाक्टर नभएर विद्यावारिधिवाला डाक्टर हुन् । छोरा विज्ञानका डाक्टर हुन् भने बाबुचाहिँं साहित्यकै डाक्टर । अब मेडिकली सृष्टियुक्त डाक्टरहरूलाई ‘मेडिकल लिटरेचर मेला, सौराहा, चितवन’ले सम्मानित गर्नुपर्छभन्ने कुनै नियम– कानुन छैन ।
डाक्टरको बाबु सम्मानित भएकोमा मलाई बेसी भन्नु केही छैन । तर कतिपय महिला साहित्यकारलाई यसप्रति व्यापकतम गुनासो हुनसक्छ । एक प्रकारले आक्रोश नै भन्नोस् । यस प्रसंगमा यस्तो सवाल जायज छ– जब डाक्टरको बाबु साहित्यकार सम्मानित हुने हैसियत राख्छ भने डाक्टरको आमा साहित्यकारलाई चाहिंँ के र कति कारणले उपेक्षा गरिएको हो ? यो त सरासरी नाङ्गो लैंगिक विभेद भयो ।
नेपाली साहित्यमा डाक्टरकोबाबु साहित्यकार मात्र नभएर डाक्टरका आमा साहित्यकारहरूका पनि उल्लेखनीय उपस्थिति रहेको छ । र यो निर्बल किसिमको रहेको छैन । तपाई कवि सन्ध्या पहाडीलाई नै लिनोस् । उनको छोरी पनि एक डाक्टर हुन् । त्यसकारण सन्ध्या पहाडी पनि ‘डाक्टर आमा’को समान सामर्थ्यले सम्मानको अधिकारी भएनन् र ? यसतर्फ ‘मेडिकल लिटरेचर मेला, सौराहा, चितवन’को ध्यान नजानु आश्चर्यजनक छ । मलाई त अन्यायपूर्णपनि लागेको छ ।
‘डाक्टरका बाबु’ साहित्यकार खगेन्द्र संग्रौला र नारायण ढकाललाई एकपटक फेरि मेरो बधाई ! दुवैले लामै समयदेखि कथा, निबन्ध, उपन्यास (कहिलेकाहीं कविता पनि) को क्षेत्रमा आआफ्ना सबल कलम चलाइरहेका छन् । तर ठोस मान्यता भने ‘डाक्टरको बाबु’ भएर पाइएको छ । के यो कम हो ? यसैको सुखद परिणामस्वरुप ‘मेडिकल लिटरेचर मेला, सौराहा चितवन’द्वारा सम्मानित भएका छन् । यो दुवैका लागि सानो उपलब्धि होइन । यसका लागि ‘मेडिकल लिटरेचर मेला, सौराहा, चितवन’लाई साधुवाद भन्नैपर्छ । यो साहित्य र मेडिकल दुवै क्षेत्रका निम्ति अविस्मरणीयघटना हो । नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठान र नेपाल मेडिकल एसोसिएसनले संयुक्त रूपमा नोट गरे हुन्छ ।
यतातिर के सुन्नमा आएको छ भने साहित्यकार खगेन्द्र संग्रौला बिरामी भएर उपचारार्थ अस्पताल भर्ना भएका छन् । र अर्का साहित्यकार नारायण ढकाल सपरिवार छिमेकी मुलुक हिन्दुस्तानको धार्मिक नगरी काशीतर्फ प्रस्थान गरेका छन् । अतः दुवै सम्मानित साहित्यकारलाई पूर्ण स्वास्थ्यलाभ र पवित्र पुण्य लाभको कामना गर्दैबिदा माग्छु ।
प्रकाशित : चैत्र ३०, २०७५ ०८:१०
दसैंँको महत्त्व र उपादेयता
डा. गोविन्द टन्डन
लामो छुट्टीमा गृहकार्य : कति उचित ?
पशु अधिकारका पक्षमा
हिन्दु र बौद्धको संगमस्थल- काँक्रे विहार
डा. नारायण मरासिनी
सिउँडी : कुइँकेल किचेन
बालगीतले गर्छन् ठूलो काम
सी भ्रमण : नेपालका आर्थिक प्राथमिकता
प्रकाशचन्द्र सापकोटा आश्विन २५, २०७६
चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनफिङको नेपाल भ्रमणको चर्चा उत्कर्षमा छ । यो भ्रमणले यति धेरै महत्त्व पाउनुका दुई मुख्य कारण छन्– पहिलो त चिनिया राष्ट्रपतिबाट दुई दशकभन्दा...
किन बढ्दै छ बालविवाह ?
राधिका सापकोटा आश्विन २५, २०७६
कानुनले विवाहको उमेरलाई २० वर्ष तोकेको छ । २० वर्ष पूरा नभई गरिएको विवाहलाई बालविवाह मानेको छ । बालविवाह कानुन विपरीत हो र यो कार्य गरेबापत सजाय...
गाउँ सचिवदेखि महासचिवसम्म
भोजराज पौडेल आश्विन २५, २०७६
चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनफिङ कुनै बेला प्रदेश प्रशासक थिए । त्यतिबेला उनलाई एकपल्ट पत्रकार सम्मेलनमा सोधिएको थियो, ‘तपाईं आफ्नै कामको मूल्यांकन गर्दा १०० दिनुहुन्छ कि नब्बे ?’
विमल निभा आश्विन २५, २०७६
कमरेडको अवस्था पहिलेजस्तो थिएन । एकाएक उनको हाइट स्वाट्टै घटेको थियो । र, यो कम भएको हाइटलाई उनी पटक्कै बिर्सन सकिरहेका थिएनन् । यसको कारण उनको बेडरुमको ठूलो...